Munaasibadii Xuska 9aad Ee Maalinta Qoomiyadaha Itoobiya Oo Maanta Si Wayn Oo Heer Qaran Ah Looga Dabaaldagay Magaalada Assosa. - Cakaara News
Munaasibadii Xuska 9aad Ee Maalinta Qoomiyadaha Itoobiya Oo Maanta Si Wayn Oo Heer Qaran Ah Looga Dabaaldagay Magaalada Assosa.
Assosa(CN) Isniin.Dec.08.2014, waxaa maanta gabi ahaan dalka Itoobiya looga dabaal dagayay xuska 9aad ee maalinta qoomiyadaha Itoobiya ee 29 bisha Hidhaar ee sanadkan 2007-da tirsiga dalka.
Munaasibadan qaran ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu saraysa dalka oo ay kamid yihiin raysal wasaaraha dalka mudane HaileMariam Desalegn, R/wasaare kuxigeenka mudane Damaqe mokonin, madaxwaynayaasha deegaanada oo ay kamid yihiin madaxwaynaha Benshangulka mudane Axmed Nasir iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha federeeshinka JDFI mudane Kassa TekleBirhan, madaxwayanaha wadanka Sudaan mudane Cumar Xasan Albashiir, madaxwaynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele, safiirada, kooxaha dhaqamada ee qoomiyadaha iyo martisharaf badan.
R/wasaare HaileMariam Desalegn ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanayahay maanta oo ay kasoo wareegtay 20 sano aas aaskii dastuurka JDFI oo sabab u ah guulo iyo isbadal badan oo maanta lagaadhay iyo xuska munaasibada qaran ee maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo siwada jira aan ugu dabaalagayno.
R/waasare HaileMariam Desalegn wuxuu aad ugu dheeraaday qiimaha iyo isbadalka ay maanta kunaaloonayaan qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya ee uu dhaxal siiyay maalintii la aasaasaay dastuurka midaynaya qoomiyadaha islamarkaana kuwadaaga danta guud.
R/wasaarahu waxaa kale oo uu sheegay in doorashada 5aad ee sanadkan kadhici doonta wadanka ay xukuumada ka go'antahay in ay noqoto mid ku dhamaata nabadgalyo, cadaalad, iyo dimuqraadiyad iyo in shacabkana looga baahanyahay in ay kaalin tooda ka qaatan. Wuxuuna uga mahad celiyay qoomiyadaha Itoobiya dhamaan iyo shacabka Benshangulka ee diyaariyay munaasibadan 9aad.
Madaxwaynaha deegaanka Benshangulka mudane Axmed Naasir ayaa khudbad dheer kasoo jeediyay taasoo uu kaga heerka uu deegaanku marayo iyo guud ahaanab ayaanka qoomiyadaha iyo shucuubta reer Itoobiya. Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu kahadlay biyo xidheenka wayn ee dib u curashada Itoobiya ee kuyaala deegaanka Benshangul Gumuz-ka.
Afhayeenka golaha federeshinka Itoobiya mudane Kasa T/Birhan ayaa sheegay in uu xuskan 9aad kaga duwanyahay kuwii hore sanadguurada 20aad ee kasoo wareegtay gun-dhigii dastuurka JDFI.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay warbaahinta deegaanku lakulantay mar la gudoonsiiyay abaal marin ayaa sheegay in maalintani ay tahay maalin ahmiyad wayn ugu fadhida qoomiyadha iyo shucuubaha Itoobiya islamarkaana ay xaqiijinayso midnimada, xaquuqaha, isjacaylka iyo dimuqraadiyada uu horseeday dastuurka JDFI oo ka dulqaaday cadaadis iyo caqabado badan oo ay soo mareen.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sidoo kale sheegay in ay farxad galinayso dhamaan qoomiyadaha Itoobiya meelkasta ay joogaan, wuxuuna intaas kudaray madaxwaynuhu in ay lagama maarmaan tahay in laga makhraati kaco isbadalka iyo dib u curashada Itoobiya islamarkaana loo baahanyahay in aan gaadhno kamidho dhalinta yoolasheena ay kamidka yihiin biyo-xidheenka wayn ee dib u curashada Itoobiya.
Madaxwaynaha wadanka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo kasoo qayb galay munaasibadan taariikhiga ah ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay oo ay tahay mid ay lawadaagayaan walalaalahooda Itoobiya.
Sidoo kale madaxwaynaha wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo markii labaad kasoo qayb galay xuska 9aad ee maalinta qoomiyadaha Itoobiya ayaa khudbad kasoo jeediyay isagoo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu kasoo qayb qaato munaasibadan taariikhiga ah ee qoomiyadaha Itoobiya. Madaxwayne Ismaaciil Cumar Geele ayaa markiisii ugu horaysay kasoo qayb galay xuskii 8aad ee maalinta qoomiyadaha Itoobiya ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ee Dawlada Deegaanka Soomalida Itoobiya.
Waxaa isla munaasibadan qaran ee maanta lakeenay koobkii Abaay ee uu dhaxalka uga tagay R/wasaarihii hore ee dalaka Males Zenawi qoomiyadaha Itoobiya maadama Abaay ay kadhaxayso 80 milyan ee Itoobiya, waxaana koobka lagu keenay diyaarad helicopter ah halkaas oo lagu wareejiyay deegaanka Benshangulka.
Waxay qoomaydkasta soo bandhigtay dhaqanka iyo ciyaaraha, waxaana guud ahaanba si qurux badan loo diyaariyay garoonka wayn ee ciyaaraha ee magaaladaasi Assosa, halkaas oo lagu soo bandhigay dabaal dag aad u qurux badan.
Ugu danbayntii waxaa lagu dhawaaqay islamarkaana labayaamiyay deegaanka qaban doona xuska 10aad ee maalinta qoomiyadha Itoobiya ee 29 bisha Hidhar ee 2008.T.I. Waxaana lagu dhawaaqay in uu qaban doono deegaanka Gambella.